गुगल बनेको २० बर्ष पुज्ञो : हेर्नुस् कसरी बन्यो सर्च इन्जिनको बादशाह ? - Arthikbazar.com
गुगल बनेको २० बर्ष पुज्ञो : हेर्नुस् कसरी बन्यो सर्च इन्जिनको बादशाह ?
Arthikbazar – तपाइँलाई केही प्रश्नको जवाफ थाहा छैन वा कुनै द्विविधा छ वा कुनै विषयको बारेमा तपाइँलाई धेरै जानकारी चाहिएको छ भने के गर्नुहुन्छ ? धेरैको जवाफ हुन्छः गुगल गर्छु ।
सायद गुगलको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यो हो कि गुगल प्रयोगकर्ताको आवश्यकता बुझ्नमा सफल रहेको छ । बीबीसी